FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : Mpianatra dimy nahazo loka avy amin’ny Ong Sage
Mpianatra dimy no nanoloran’ireo avy amin’ny Ong Sage loka tamin’ny fifaninanana sary nampanaovin’ny Ong Sage tamin’ireo mpianatra avy amin’ny sekoly manodidina ny faritra arovana Montagne des Français. 11 octobre 2017
Tao amin’ny trano malalaka ny Sage taty Antsiranana no nanatanterahana izany ny faran’ny herinandro lasa teo. Nifantoka tanteraka tamin’ny fanaovana sary mifandraika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy famoronana teny filamatra izay entina hanentanana ny olona amin’ny faritra arovana no fifaninanana nataon’ireo mpianatra ireo.
Ka ny mpianatra avy amin’ny sekoly Ambodimagnary no nahazo ny loka voalohany tamin’izany. Fitaovam-pianarana, toy ny rakibolana, kitapo, fatana mitsitsy sy ny maro hafa no natolotra ireo mpianatra dimy mianadahy ireo.
Ho fampirisihana azy ireo amin’ny fianarana, entina hanamafisana ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Ka ny faritra arovana Ambohitritsingy montagne des français no manakaiky azy ireo. Ankoatra izany dia notolorana fitaovana, toy ny tsaoka, kahie ho fanomanana ny taom-pianarana ihany koa ireo avy amin’ny sekoly nandray anjara tamin’ny fifaninanana.
Azo ambara araka izany fa efa fahombiazana lehibe ny fahitana sangasangan’ireo ankizy mpianatra amin’ny fiheviny mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanamafy izany ny hafatra mba hitandrovana izany fananana sy fitaovana hoentina hanatanterahana ny fanentanana tamin’ireo sangasangan’ny mpianatra madinika ireo. Ary misy tamin’izy ireo no nitondra hafatra mafonja ho an’ny maro.
Alaina, ohatra, tamin’izany ny teny faneva napetraky ny mpianatra iray anisan’ireo nahazo loka tamin’izany, izay nilaza hoe "Izay mandoro ala dia fahavalom-pirenena, fa izay miaro azy hibata fandresena". Nandritra izany ihany koa no nanehoan’ny chef Zap ny fahavononana ny hiara-hiasa amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ity farany no nitarika ireo delegasiona ary nahitana ireo ray aman-dreny sady nilaza fa nanamafy ny tohana ho an’ny fandaharam-pianarana izao hetsika iarahana amin’ny Sage izao.